Ọnụ ala European aga Olee otú Iji Nweta E | Save A Train
Home > Ingbọ njem njem Turkey > Ọnụ ala European aga Olee otú Iji Nweta E
Ọnụ ala Europe dị ọnụ ala bụ isiokwu na-ekpo ọkụ. Na mbụ, njem nleta na Europe pụrụ ịhụ ihe nile si oké kọfị ụlọ ahịa ka osimiri mara mma. N'ihi obodo ndị dị ka Venice, Rome, na Paris ọtụtụ nde ndị njem njem na Europe kwa afọ. Anyị kere a ndepụta nke dị ọnụ ala European ebe anyị na-agụ akwụkwọ. Ndepụta a gụnyere otu esi aga ebe ụgbọ oloko.
Porto, Portugal bụ anyị First Cheap European ebe
Ọtụtụ ihe kwesịrị ịrịba ama banyere Porto bụ ya’ ịrịba mmanya. Nke a Cheap European ebe n'akụkụ oké osimiri bụ a European Obere-obodo ukwu. Porto dị ukwuu n'ihi na omenala na dika dị mma maka ndị hụrụ n'èzí. The ngosi ihe mgbe ochie na ije nke a ọnụ ala European ebe bụ Chineke. n'ezie, a ebe ileta.
Maka ntuziaka ka esi aga Porto’s Sao Bento ebe ụgbọ okporo ígwè tinye Save A Train.
Seville bụ a tọrọ-azụ obodo. Enwe otu ehihie ehi ụra ehihie. Jewish, Christian, na omenala Alakụba. Gaa na oge ochie ụka na ghettos n'ụbọchị. The nri na-atọ ụtọ, karịsịa tapas. The impromptu guitar music na n'okporo ámá captures na-atụrụ ndụ ikuku nke Seville. Nke a Cheap European ebe obodo nwere eleghị anya ihe kasị mma amara na Europe na a ọgaranya akụkọ ihe mere.
N'ihi na ntụziaka na ahịa na-esi ruo Seville Santa Justa ọdụ ụgbọ okporo ígwè ahụ Save A Train saịtị.
Valencia nwere 3 ọmarịcha osimiri. N'ihi ya, ọ nwere nnukwu ihe omume n'èzí. A Cheap European mba park bụ a akwa ebe maka hiking. Ebe dị nso na La Albufera National Park bụ oké ebe hiking. Foodies nwekwara n'anya Valencia maka ya ọhụrụ mepụtara.
Maka uzo esi aga Valencia Station nke Ugwu ụgbọ okporo ígwè tinye na ebe nrụọrụ weebụ Save A Train.
Istanbul, Turkey bụ ikpeazụ anyị ọnụ ala European ebe
Ọzọ dị ịtụnanya na ọnụ ala obodo bụ Istanbul. N'ihi na Turkish isi obodo na-eweta ọnụ Europe na Asia. Ọgaranya na nketa, mara mma ije, na osisi mara mma. Skylines nke domes na ọmarịcha mmiri na-acha anụnụ anụnụ na-agba ọsọ n'akụkụ Istanbul. Nke a obodo dị ukwuu n'ihi na uche ziri ezi na-eju echiche, na-esi isi, na ụda na isi obodo. Na-ewu ewu nri ebe a bụ doner kebab na Turkish sweet emeso na ike zụrụ na n'okporo ámá. All nke n'elu nwere ike ná nnọọ ezi uche ahịa
Maka ntuziaka ka esi aga na ọdụ ụgbọ oloko nke Sirkeci nke Istanbul gaa na ebe nrụọrụ weebụ Save A Train.
AKWỤKWỌ gị ọzọ ụgbọ okporo ígwè njem na anyị
Na-eme atụmatụ a njem Cheap European aga? Ọ gaghị 3 nkeji iji chọta ọnụ ala ụgbọ okporo ígwè njem. Nbanye anyị website ugbu a ma na-kacha mma na-enye, ngwa ngwa na mfe. Anyị na-anabata niile isi iche nke ịkwụ ụgwọ.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcheap-european-destinations%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/nl_routes_sitemap.xml na i nwere ike ịgbanwe / nl na / de ma ọ bụ / ru na ndị ọzọ asụsụ.
ụgbọ okporo ígwè Atụmatụ Train Travel njegharị Njem toro toro